Hargeysa: Xisbiga KULMIYE Oo Xafiis Muhiim Ah Ka Furtay Xaafada Gacan-libaax Ee Magaalada Hargeysa | Xarshinonline News
Hargeysa: Xisbiga KULMIYE Oo Xafiis Muhiim Ah Ka Furtay Xaafada Gacan-libaax Ee Magaalada Hargeysa
Posted by xol2 on June 16, 2010 · Leave a Comment
Hargeysa (Nnn)- Xisbiga mucaaradka ah ee KULMIYE, ayaa galabta xafiis muhiim ah oo qayb laxaad leh ka qaadanaya dardar-gelinta hawlaha ololaha doorashada ee ka furtay Degmada Gacan-libaax magaalada Hargeysa.
Xafladii furitaanta xafiiska oo lagu qabtay isla goobta xafiiska laga furayay, ayaa waxa ka soo qayb-galay masuuliyiin sare oo ka socotay xisbiga KULMIYE, madaxda heer degmo ee xisbiga Kulmiye iyo taageeraal fara badan.
Ugu horayn waxa halkaas ka hadlay Gudoomiyaha degmada Gacan-libaax ee xisbiga KULMIYE Axme Yoonis Aadan [Juxa], oo ku hambalyeeyey taageerayaashii soo diyaariyey xafiiskaas, “Waxa aad tihiin dad isa soo abaabulay oo ay ka go’antahay taageerada ay u hayaan xisbiga KULMIYE. Kuwa ku soo biiraya xisbiga waanu hambalyaynaynaa kuwa cusub ee xisbiga ku soo biray iyo kuwii hore ugu jiray-ba. Waxa aan idiin sheegayaa xisbiga KULMIYE maaha xisbi laka leeyahay ee taageerayaashii hore ugu sii jiray iyo kuwa hadda ku soo biiray-ba talada way u siman yihiin.” Ayuu yidhi Axme Yoonis Aadan [Juxa].
Waxa iyaduna halkaas ka hadashay Gudoomiye ku xigeenka ololaha doorashada gobolada Galbeedka ee xisbiga KULMIYE Xusni Maxamed Warsame, ayaa sheegtay in xafiiskani door muhiim ah ka qaadanayo dardar-gelinta hawlaha doorashooyinka ee xisbiga KULMIYE ku doonayo inuu ku hanto doorashada madaxtooyada ee 26-ka June waddanka ka dhacaysa.
Waxaana hadaladeedii ka mid ahaa oo ay tidhi “Walaaloyaal waxa aan idiin sheegayaa maanta dan gaar aha ma lihin ee dan guud ayaynu wada leenahay, waxa aynu u wada halgamaynaa isbedel. Isbedelkaasina gacmaheena ayuu ku jiraa, manaha isbedelku inaynu qof jeclaysanayno oo ay talada saarayno ee waxa aynu doonaynaa maamul wax inoo qabta.”
Waxaana ay intaas raacisay oo ay tidhi “Walaaloyaal waad ogtihiin oo xaafadeena Gacan-libaax waxa ay noqotay xaafada ugu ayaanka daran. Biyo lihin waddo ma lihin oo Tiin ayaa ina qabsaday, Laydh ma iyo waddooyin ma lihin, waxa allaaleyaale waxa aynu odhan karno dawladaasi way idiin qabatay ma jirto. Sidaa awgeed waxa aynu doorbidnay inaynu xaafada KULMIYE galno oo barnaamij ayuu la yimi, kaas ayaynu kula hawlgelaynaa. Barnaamijkaas garabka Haweenku iyo ka dhalinyaradu-ba waxabay ku leeyihiin.”
Waxaa iyaguna halkaas ka hadlay Sahra Cabdilaahi Ibraahin oo ah Gudoomiyaha Garabka Haweenka degmada Gacan-libaax ee xisbiga KULMIYE, oo sheegtay inay haween ahaan codkooda iyo taageeradoodaba isla garan taagi doonaa xisbiga KULMIYE.
Maxamed Shukri oo ka mid ah masuuliyiinta KULMIYE, ayaa isaguna waxa uu iftiimiyey in isbedelka Somaliland u baahan tahay uu keeni karayo xisbiga KULMIYE haddii loo doorto talada dalka, isla markaana waxa uu taageerahsa xisbiga ku adkeeyey inay laban-laabaan dadaalkooda la xidhiidha hawha ololaha doorashada.
← Guddiga ilaalinta Anshaxa Doorashada oo eedaymo u jeediyay Telefishanka Qaranka
Hargeysa: Maxkamad xukun ku ridday Rag fikir khaldan ka dhaadhiciyay Arday ay wax barayeen →